[Phambi kweSiteshi sase-Anshan] Isikrini esikhulu esicacile esingu-100-intshi esicacile/Isifunda sokuthenga phambi kwesiteshi/Isiteshi sesitimela sabagibeli/ukukhanya kwelanga okugcwele/isikhiya esihlakaniphile/ukushisisa phansi/ukukhanya okunethezeka kwesitayela saseNordic - I-Airbnb
[Phambi kweSiteshi sase-Anshan] Isikrini esikhulu esicacile esingu-100-intshi esicacile/Isifunda sokuthenga phambi kwesiteshi/Isiteshi sesitimela sabagibeli/ukukhanya kwelanga okugcwele/isikhiya esihlakaniphile/ukushisisa phansi/ukukhanya okunethezeka kwesitayela saseNordic
Anshan, Liaoning, i-China
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-棉花堂之家
U-棉花堂之家 Ungumbungazi ovelele
Icophelela yonke imininingwane, ifakwe amasethi ezindlu zangasese ezilahlwayo nezinkomishi zamanzi alahlwayo, izinsiza zehhotela zezinkanyezi ezinhlanu, ezifakwe umakhalekhukhwini we-Xiaomi nezipikha ezihlakaniphile ze-Xiao Ai, amahitha ahlakaniphile asendlini yokugezela, namakhaya ahlakaniphile asondelene endlini yonke.
Itholakala e-Kangxin Garden Community, amamitha angu-10 empumalanga ye-Anshan Station Wanqiu City Square, emaphethelweni e-Xiangchai Bao Ma Hotel ne-Guanghe Building, eduze ne-Anshan Stesheni Sesitimela, i-Anshan Travel Terminal, ne-Anshan Station Front commercial Street. Ukuhlala lapha, akudingeki ukhathazeke ngokulahlekelwa isitimela. Uqhele cishe ngemizuzu engu-5 ukuya Esiteshini sase-Anshan. Izinto zokuhamba ezizungezile zilungele. Ngezansi yindawo yebhasi ye-Anshan City, engakuyisa ngokuqondile kuzo zonke izingxenye zedolobha.
Ikamelo yikamelo elikhulu elingu-56 sqm elinezindawo ezihlukahlukene zokuhlala ezifana nomshini wokuwasha, ifriji, i-air conditioning, ukushisa okuningi kwaphansi ebusika, ikhishi elivulekile, igumbi lihlome ngeprojektha yakho eyintandokazi engu-100-inch yencazelo ephezulu, isistimu ye-Android eyakhiwe nge-Iqiyi, i-Tencent Video nezinye isofthiwe yokuzijabulisa, futhi amalungu okulungisa ividiyo ye-Youku angabuka imuvi yakamuva nezinsiza ze-TV.Ikhompyutha enkulu yokuzijabulisa yehhovisi engu-27-inch ne-100MB ye-wifi enejubane elikhulu, i-JD ekhethiwe ngokucophelela i-JD proprietary shower gel, i-shampoo, i-conditioner, i-sanitizer yezandla, njll., elungele uhambo lwebhizinisi, amahhovisi, ukuvakasha.
Ikamelo liwukuhlobisa kwesitayela sase-Europe, kuhlanzekile futhi kucocekile, amashidi namathawula okugeza ashintshwa ngemva kwesivakashi ngasinye, imibhede emikhulu yase-France enefenisha yokuklama yezinkanyezi ezinhlanu, eyenza ikamelo lonke libukeke lingafani, ngezibani zemvula ezinamaphupho okwenza kube mnandi nakakhulu.Ukubuka ebusuku kwe-Mount Fallen Park kugcwele, uhlezi ngasefasiteleni uxoxa futhi ujabulele ukubuka indawo akukwazanga ukuba mnandi.
Konke kuhlotshiswe ngezinkanyezi ezingu-5. Isakhiwo sinakho konke okudingayo, okuhlanganisiwe, izifafazi zomlilo, njll. Ukugada nokuqapha kokuphepha kwamahora angu-24, kanye nezinga eliphakeme lesisekelo sikahulumeni wase-East Iron District sokuhlala kwakho unokuthula kwengqondo.
Qaphela: Lolu hlobo lwekamelo lutuswa kubantu abangu-1-2.
Imithetho yokungena: Umuntu ohlala endlini udinga ukubamba ikhadi lakhe likamazisi, sicela ungabeki i-oda ngaphandle kwekhadi likamazisi, idiphozithi ye-inthanethi ka-200 yuan, akukho ukupheka egumbini, alikho igumbi lomshado, azikho izingane ezincane.
Uma uhlela ukwandisa ukuhlala kwakho, qiniseka ukuthi uthintana nomninikhaya kusengaphambili ukuze ubeke i-oda, isikhathi sokuqasha singaphansi kokubhukha.
Ukupaka kuyatholakala eduzane ngemali futhi mahhala.
Kuqhele ngamamitha angama-50 ukusuka emgwaqeni wezohwebo wedolobha, imizuzu emi-3 ukuhamba ngezinyawo
Iqhele ngamamitha angama-50 ukusuka e-Anshan Railway Station kanye nokuhamba imizuzu emi-3.
Amamitha angu-50 ukusuka e-Anshan Bus Terminal, uhambo lwemizuzu emi-3
Iqhele ngamamitha angu-20 ukusuka esiteshini sebhasi kanye nokuhamba iminithi elingu-1.
Amamitha ayi-100 ukusuka esitobhini sebhasi saseQianshan Scenic Area, imizuzu emi-5 ukuhamba
Iqhele ngamakhilomitha angu-1.8 ukusuka e-Yufo Mountain Scenic Area-Eryjiu Park, futhi ingafinyelelwa ngokuhamba ngezinyawo imizuzu engaba ngu-15.
Ngifinyeleleka njalo phakathi nokuhlala kwakho
U棉花堂之家 Ungumbungazi ovelele
Hlola ezinye izinketho ezise- Anshan namaphethelo